Niziphathe ngendlela nge pasika | News24
Niziphathe ngendlela nge pasika
Amagosa esiXeko azakuqinisa isandla kwabo bazakophula umthetho ngeethuba leeholide zepasika. PHOTO: Mandla Mahashe
Amagosa esipolisa esiXeko athi alilungelele ixesha elixakekileyo lepasika elihamba nokuvalwa kwezikolo nokutyelela amaphondo.
Azakusebenzisa ezinye zezicwangciso ebezisebenzisa ngexesha ekupheleni konyaka edlulileyo, eziquka ukuqwalaselisa umba wokusela ngaphantsi kweempembelelo zotywala nezinye iziphoso zendlela, ukupatrola kwiindlela ezinkulu ezifana neN2, ukubeka iliso kumanxweme nezinye iindawo zeendibano loluntu.
Ngokutsho kojongene nezokhuseleko kwikomiti kasodolophu uJP Smith amagosa ezendlela esixeko azakusebenzisana nawephondo kwiphulo uExodus elizakuqinisekisa ukuba iinqwelomafutha nabaqhubi ingakumbi abazakuqhuba umgama omde bakulungele oko.
“Ndiyivila imikhwiniba yabaqhubi ngeziqinisekiso zokhuseleko ezenziwayo mvanje. Ingathi abanankathalo ngokhuseleko lwabo baxhomekeke kubo ukuba babathathe babase kwizalamane zabe ngelixesha leeholide. Ndiyababongoza abaqhubi beetaxi nebhasi , nabo bahamba ngeenqwelo zabo, bayokuhlolisa iinqwelo zabo phambi kokuba bahambe umgama omde. Yeyiphi eyona imbi, kukufika mva okanye ungabi safika?”ubuzile uSmith.
Amagosa endlela iMetro Police, Law Enforcement kunye neTraffic Service azakuqhuba ngeqnkqubo zazo zokugcina ucwangco eziquka ukumiswa nokugqogqwa kweenqwelo, ukubanjwa kwabo bafunekayo nokugcina komthetho.
Kutshanje isiXeko sithi sifumanise imipu engekhosemthethweni emibini saze sabamba abantu abaliqela ngezityholo ezidibenise neziyobisi.
“Ukubanjwa kwalemigeweu kuzakubonisa ukuba sisabajongile abpp[hulimthetho. Bacinga kuba sijolise kwixesha leholide sibayekile, abaqhashanga. Sizakuqinisekisa ukuba sizakubonakalo ndawo zonke kuba nokuba mnintsi umsebenzi. Kubalula ukuqinisekisa ukuba umthetho uyalandelwa xa uluntu lusebenzisana namagosa ethu. Yaye siyabona abantu ukuba bayeza ngaphambili bancediasne nathi ekubambeni lemigewu yaye sithi nangamso,” utshilo uSmith.
Uthe uluntu lungatsalela u107 ngethuba likaxakeka okanye bafomane 021 480 7700 xa nomyayi.